Ankoatra ny fambolena voajanahary voajanahary sy mandrakotra ny vatohara, ny famerenana indray ny fantsom-bary dia mety ho fandraisana andraikitra lehibe ihany koa rehefa simba ny rafitra voajanahary voajanahary, na simba, na tsy mety amin'ny haran-dranomasina. Ohatra, ny fepetra fanampiny fanampiny dia mety ilaina ao amin'ny faritra izay nanaparitahan'ny mpanjono ranomandry ny rafitra harambato talohan'ny fampidinana teknika fanarenana ny moron karaoty ary outplanting mety hahomby. Ny vatoharan-dranomasina izay ahafahan'ny macroalgae manjaka ny vatan'ny haran-dranomasina dia mety mila fepetra hanatsarana ny vodin-tsakafo ihany koa mba hanamboarana ny vovo-drivotra azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena voajanahary sy ny fomba fandraisana mpiasa voajanahary.
Toerana fanamboarana haran-dranomasina izay mety amin'ny asa fanarenana ny haran-dranomasina. © Reef Explorer (Fiji) Ltd.
Ny tetikasa famerenana amin'ny fanorenana mifototra amin'ny tetikasa momba ny haran-dranomasina dia notadiavina hitady toerana honenan'ny vatohara amin'ny alàlan'ny fametrahana rafitra artifisialy isan-karazany. Ny fandaharan'asam-pamokarana vaovao momba ny harena voajanahary mifantoka amin'ny fantsona dia mikasa ny hampiasa fitaovana izay mampiroborobo ny fizotran'ny fanarenana vatohara amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana izay mamela ny fananganana coral na ny fametrahana sombin-tsokosoko mivantana amin'ny rafitra amin'ny fomba fiasa mifangaro. Raha mbola azo atao, dia manolo-kevitra ny hampivelatra ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanenan-java-manitra ny fampiroboroboana ny haran-dranomasina voajanahary.
Ny fampahalalana bebe kokoa dia hita ao amin'ny lesona Famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ho an'ny lesona momba ny fitomboan'ny morontsiraka Fampianarana amin'ny famerenana amin'ny laoniny an-tserasera.